တရုတ်နိုင်ငံက မိုးလေဝသဂြိုဟ်တုသစ် လွှတ်တင် - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ဇွန် ၅ ရက်တွင် Fengyun-3E (FY-3E) ဂြိုဟ်တုအား သယ်ဆောင်ထားသည့် Long March-4C ဒုံးပျံအား လွှတ်တင်နေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ကျိုချွမ် ၊ ဇူလိုင် ၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံက မိုးလေဝသဂြိုဟ်တုသစ် တစ်စင်းအား နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း ကျိုချွမ်ဂြိုဟ်တုလွှတ်တင်ရေးစင်တာမှ ဇွန် ၅ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်း ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ လွှတ်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။Fengyun-3E (FY-3E) ဂြိုဟ်တုအား ပေကျင်းစံတော်ချိန် ဇူလိုင် ၅ ရက် ၂၈ မိနစ်တွင် Long March-4C ဒုံးပျံဖြင့် လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး Long March ဒုံးပျံစီးရီး၏ ၃၇၇ ကြိမ်မြောက် ပျံသန်းမှု ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်အမျိုးသားအာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။
အဝေးထိန်းအာရုံခံကိရိယာ ၁၁ ခု တပ်ဆင်ထားသည့် FY-3E ဂြိုဟ်တုသည် အရပ်ဘက်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် နံနက်ခင်း အစောပိုင်းတွင် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းအတွင်း ဝင်ရောက် လည်ပတ်မည့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး မိုးလေဝသဂြိုဟ်တု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သက်တမ်း ၈ နှစ် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပြီး အဓိကအားဖြင့် လေထုအပူချိန် ၊ စိုထိုင်းဆ နှင့် ကိန်းဂဏန်းခန့်မှန်းချက် application များအတွက် အခြားမိုးလေဝသဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရာသီဥတုခန့်မှန်းနိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းဂြိုဟ်တုသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအား တုန့်ပြန်မှု ပိုကောင်းရန် နှင့် မိုးလေဝသသဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်တားဆီး လျှော့ချရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နှင်း နှင့် ရေခဲ ဖုံးလွှမ်းမှု ၊ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အပူချိန် ၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် နှင့် ဂေဟဗေဒကို စောင့်ကြည့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထို့ပြင် ဂြိုဟ်တုသည် နေရောင်ခြည် ၊ အာကာသပတ်ဝန်းကျင်များ နှင့် ယင်းတို့၏ သက်ရောက်မှုများကို စောင့်ကြည့်သွားမည်သာမက အာကာသမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များ နှင့် အထောက်အကူပြုဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန် ionospheric အချက်အလက်များကို စောင့်ကြည့်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဂြိုဟ်တု နှင့် ဒုံးပျံအား ရှန်ဟိုင်းအာကာသယာဉ်နည်းပညာအကယ်ဒမီက တီထွင်ခဲ့ကြောင်း ၊ ယင်းအကယ်ဒမီသည် တရုတ်နိုင်ငံလေကြောင်းသိပ္ပံ နှင့်နည်းပညာကော်ပိုရေးရှင်း၏ လက်အောက်တွင် လုပ်ဆောင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
The satellite and rocket were developed by the Shanghai Academy of Spaceflight Technology. It operates under the China Aerospace Science and Technology Corporation. ■
Photo – A Long March-4C rocket carrying satellite Fengyun-3E blasts off from the Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China on July 5, 2021. (Xinhua/Wang Jiangbo)Global